အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: Me Missing You
Posted by တီချမ်း at 6:09 PM
Bino February 10, 2010 at 1:35 AM
မအိပ်ခင်ကိုယ်က တခုခုသောက်လေ့ရှိတော့ သူက ကော်ဖီ ဖြစ် ကော်ဖီ၊ အိုဗာတင်းဖြစ် အိုဗာတင်း တခုခု အမြဲဖျော်ပေးပါတယ်။ ညအိပ်ခါနီး ကိုယ်က ရေချိုးပြီးမှ အိပ်တတ်ပါတယ်။ မအိပ်ခင်ကို ချိုးရပါမှပါ။ သူ့ကိုလဲ အတင်းချိုးခိုင်းတတ် ပါတယ်။ သူကတော့ အိမ်မှာတနေ့လုံးနေနေရတဲ့ သူဆိုတော့ ချွေးတွေ ဘာတွေမထွက်ရင် မချိုးချင်ပါ ဘူး။ နည်းနည်း ပျင်းတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ မရဘူး ချိုးရမှာ အိပ်ပျော်တယ်။ မချိုးရင် သူ့ကို တူတူပေးမအိပ်ဘူး ဧည့်သည်တွေအတွက် အခန်းပိုမှာ သွားအိပ်လို့ပြောတော့မှ ချိုးတာ ပါ။ ထားပါတော့ ပြောပြချင်တာက ရေချိုးပြီးရင် သူက အမြဲလိုရှင်းလူးပေးပါတယ်။ တကိုယ်လုံးပါ။
Oh! sound good.
အဆိုးဆုံးက အတူတူနေနေကျ လူတယောက် ကိုယ့်ဘေးကနေရုတ်တရက် ပျောက်သွားတဲ့ အခါ နေရထိုင်ရခက်တာပါ။ လူက အူနေ ကြောင်နေတယ်လေ။ လွမ်းနေတာမျိုးလားဆိုတော့ အဲ့လိုခံစားချက်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ လိုအပ်နေတာ။
Replace by another one.
မပြေလို့ ခုဒီပိုစ့်ရေးပြီး စာဖတ်သူတွေကို ကိုယ့် အထီးကျန်မှုတွေ မျှဝေနေတာပေါ့။
Sharing or releasing or relaxing?
အန်တီချမ်း February 10, 2010 at 3:51 PM
ဘာမှ မဟုတ်ဘူး ကိုဘီနိူကြီးရေ
ယောက်ျား ရကံကောင်း လင်ကုန်မမှောက်ဘူးဆိုတာ ကြွားနေတာ
10 Feb 10, 15:32
ရွှေစူး: သူက ဘယ်ပြန်သွားတာလဲ .. ပြန်ခေါ်လိုက်လေ
10 Feb 10, 15:31
10 Feb 10, 12:40
Glacier: ခေါက်ဆွဲအေးတို့၊ ရေခဲမုန့်ကြော်တို့၊ Ice tea တို့ဆိုတာ မခံစားတက်သေးဘူးဗျ။
10 Feb 10, 12:39
Glacier: စီဘောက်စ်မှာ မန့်ရင်လဲ တီကရွှေ့ရလို့ဆိုပြီးအော်မှာ ကြောက်ရသေးတာ။
10 Feb 10, 12:38
Glacier: တီရေ မန့်လို့မရဘူးခင်ဗျ။
naychi February 10, 2010 at 4:05 PM
ပိုစ့်ဖတ်ပြီး ဗိုက်ဆာသွားတယ် (ဟင် ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူး)
khin oo may February 10, 2010 at 10:24 PM